I-eBay ye-iOS sele isivumela ukuba sihlole ibhakhowudi ukuthengisa iimveliso | Iindaba zeGajethi
I-eBay ye-iOS sele isivumela ukuba sihlole ibhakhowudi ukuthengisa iimveliso
Okwangoku kwintengiso sinoluhlu olubanzi lwezinto onokukhetha ukuzenza xa kufikwa ekuthengiseni yonke into eseleyo kuthi, ukuba sikhathele yiyo okanye iyekile nje ukuba luncedo kuthi. Ngelixa kuyinyani oko uninzi lwabasebenzisi lufuna ukukhawuleza izicelo ezithengisa iimveliso zisinika zona, abanye babhenela "ekungazichazeni" ezinikezelwa zezinye iinkonzo ezinje nge-eBay.
I-eBay iyeyona ndawo iphambili ekhoyo ngoku kwi-Intanethi ukuthengisa yonke into eseleyo kwaye siyayazi loo nto inemveliso encinci kwimeko yethu. Ukongeza, lelona qonga liphezulu lokuphepha ukudibana nabantu ongabaziyo ukuze ujonge imeko, kuba isekwe kudumo lwabasebenzisi kunye nasekuthengweni okukhuselekileyo ngePayPal. Ngale ndlela, isicelo se-iOS sisandula ukufumana umsebenzi obalulekileyo.
Isicelo se-iOS, ekugqibeleni sisivumela ukuba sisebenzise umsebenzi owawusele ufumaneka kodwa wabathengi kuphela, umsebenzi osivumele ukuba sihlole ngekhamera, isixhobo esiphathwayo, ibhakhowudi yemveliso esiyifunayo, ukuze ukuyifumana ngokulula. Kodwa ngoku sinako Sebenzisa ukukhangela kwebhakhowudi ukongeza iimveliso ukuba sifuna ukuthengisa eqongeni ngale ndlela, sinokongeza zonke iinkcukacha zeemveliso esifuna ukuzithengisa ngendlela ekhawulezayo.
Ukusebenza kwalo msebenzi ulula kakhulu, kuba kufuneka siye kuphela kwicandelo apho sidibanisa iimveliso ezintsha ukuzithengisa kwaye ucofe ikhamera, ukuze ivule kwaye ikhangele ibhakhowudi esiyibonisayo. Nje ukuba ufumanise ibhakhowudi, Onke amasimi emveliso aya kugcwaliswa ngokuzenzekelayo kwaye kuya kufuneka songeze ixabiso kunye nemigaqo yokuhlawula, kunye nenkcazo emfutshane.
I-eBay: ifashoni, elektroniki kunye nasekhayaMahala
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Umnxeba » Iiselfowuni » I-eBay ye-iOS sele isivumela ukuba sihlole ibhakhowudi ukuthengisa iimveliso
I-Samsung ye-E Emoji inokusetyenziswa ngexesha lokufowuna kwevidiyo kwixa elizayo
I-Energy Tower 8 G2 Wood, sihlalutya eyona nqaba inesandi kakhulu ye-Energy Sistem